ခက်ဦး – အညံ့စားရုပ်ရှင် (မိုးမခ) မတ် ၁၇၊ ၂၀၁၇ အလွဲတုအလွဲယောင်တွေမှန်း တည့်တည့်ကြီးသိပါလျက်နဲ့ အောင့်သက်သက်ကြည့်ကြည့်နေရ ပျင်းစရာကွယ် ။ ၁၅ . ၃ . ၂၀၁၇
ခက်ဦး ● ငှက် (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၆ ကိုယ်ထည်ထက် အတောင်ပံ ကျယ်မှ သန်မှ ပျံနိုင်လိမ့်မယ် ခက်ဦး ၆ . ၁၂ . ၂၀၁၆
ခက်ဦး – အကယ်ဒမီရှော့ (မိုးမခ) ဧပြီ ၅၊ ၂၀၁၆ အယောင်ဆောင်နိုင်ခဲ့သူတွေဟာ အဆောင်အယောင်တွေကြားပြိုးပြက်ကာ သာသာယာယာ …
ခက်ဦး – ပါဂျောင် (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၆ သွေးစီးကြောင်း မဟုတ်ခဲ့ မီးမောင်း သာဖြစ်ရဲ့ အာသံကုန်းထက်က မငြိမ်းတဲ့ ကြယ်တွေ ။ (၁၃ . ၂ . ၂၀၁၆)